Umkhiqizi nomhlinzeki we-GW14T16 ohamba phambili we-Multi-head Combining Weigher | GAOGE
Sishayele: +86 551 65636250
Imishini Yokuvula Umlomo Ovulekile
Imishini Yokupakisha ye-VFFS
Imishini Yokupakisha Yangaphambi Kwesikhwama
Umshini Wokupakisha weGranule
Powder Impahla Machine
Umshini Wokufaka Liquid
Isikhwama ku-Bag Packing
Isikhwama Ekupakisheni Kwamacala
Izinsiza kusebenza ze-Ancillary
I-Bulker Linear Weigher
Inhlanganisela yamakhanda amaningi
I-GW14T16 Inhlanganisela yamakhanda amaningi
Isikhwama ku-Carton Intermittent ...
500-1000g Usawoti Granule Pack ...
Okuzenzakalelayo Ketchup Utamatisi Sa ...
Okuzenzakalelayo ngokugcwele Pre-ezenziwe Po ...
I-GW Series Multihead Weigher ilungele ukukala itiye, imbewu, ubhontshisi wekhofi, ubhontshisi kashokoledi, omisiwe, i-Hardware ne-Plastic Particles njll. enesisindo esikhulu.
Ama-multihead weigher amadivayisi azimele, ajwayele ukufakwa emishinini yokupakisha futhi asebenze ndawonye nawo. Umsebenzi oyinhloko wedivayisi yokulinganisa kungukuhlukaniswa komkhiqizo ngamanani achazwe ngaphambilini, asethwe opharetha womshini. Izilinganiso ezilungele bese ziphiwa imishini yokupakisha.
Indlela yokusebenza yabalingisi be-multihead:
Lolu hlobo lwamadivayisi wokulinganisa lungasetshenziselwa ukulinganisa noma yimiphi imikhiqizo eyimbudumbudu neminye imikhiqizo esesimweni esiqinile, kufaka phakathi leyo enokuma okungajwayelekile kwejiyomethri. Ngokuvamile, i-multihead iqukethe iziteshi ezidlidlizayo, ezondla ama-hopper anesisindo ngomkhiqizo. Ama-hopper anamathiselwe esikalini esinesisindo, esenza ukukalwa kwesisindo somkhiqizo. Ngokungafani nabalingisi abalinganayo, lapho isisindo somthamo sitholwa ngokukhipha i-hopper eyodwa i-mulihead izuza umthamo owodwa ngokuthululwa kwama-hopper amaningana ngasikhathi sinye Lezi zinhlobo zezinhlelo zokulinganisa zifakwe i-algorithm ekhethekile ehlola ubuningi be umkhiqizo kuwo wonke ama-hopper owodwa futhi ukhetha inhlanganisela efanelekile yama-hopper ezothula umkhiqizo emshinini wokupakisha. Ngale ndlela, ukusebenza okuphezulu kakhulu nokunemba kokulinganisa kufinyelelwa. I-multihead ukuphela kwensiza yokufaka okungaqinisekisa ukucacisa okuphezulu lapho kwenziwa imithamo yemikhiqizo, lapho isisindo segranule / iyunithi eyodwa ingaphezu kuka-5-6 g.
Ifanele ukulinganiselwa kwanoma yimiphi imikhiqizo eyimbumbulu isesimweni esiqinile, kufaka phakathi imikhiqizo enokuma okungajwayelekile kwejometri. I-multihead weigher ilungele ikakhulukazi ukusebenza nemikhiqizo, lapho isisindo socezu olulodwa singaphezu kuka-5-6 g. Ingasetshenziselwa amabhisikidi, izithelo ezomisiwe, amaswidi, ama-waffles amancane, imikhiqizo efriziwe, ama-jellies, i-pasta, ukudla okulula, i-granola, ama-chip, amantongomane, ama-crackers, ama-mini-croissants, ama-fried blanched
Umsebenzi Omkhulu Nezici:
1. Professional digital enesisindo module ngokunemba high kanye nokuzinza okuhle.
2. Isistimu Yokulawula: I-MCU noma i-PLC (ngokuzithandela).
3. Isikrini esibonakalayo sinamazinga ahlukene wokufinyelela okugunyaziwe; kufika kuzilimi ezi-16 ezahlukahlukene zokuzikhethela; isoftware yohlelo lokusebenza ithuthukiswe nge-USB.
4.Imingcele yefektri yokuthola umsebenzi; 99 amapharamitha womkhiqizo osethwe ngaphambilini ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zohlelo lwepharamitha.
5.Ukukala i-hopper ekwazi ukukhipha ukuze kuvinjelwe ngempumelelo imikhiqizo ekuvimbeni.
6.Ukukala nokubala umsebenzi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene ezivela kumakhasimende.
7. Ukuboniswa kwangempela kwe-amplitude yepani ngalinye lokudlidliza kanye nesisindo somkhiqizo ku-hopper ngayinye ukuqapha kangcono isimo sokusebenza somshini.
8. Umzimba womshini one-SUS304 / 316 ngenketho; I-IP65 uthuli nokwakhiwa okungangeni manzi.
Umsebenzi wokuhlanza: ukwazi ukwenza ama-hopper asesimweni sokuvula ukuze kube lula ukuhlanzwa nokugcinwa kwansuku zonke.
10.Umklamo modular wesistimu yokulawula ukugcinwa okulula nokonga izindleko.
11. Iklanyelwe imikhiqizo emincane eyimbudumbudu ngokunemba okuphezulu nangejubane elisebenza ngokushesha.
12.Usayizi ohlangene wokonga isikhala.
Ukwakhiwa Insimbi engagqwali i-AISI 304
Ukukhiqiza Imithamo engama-65/120 ngomzuzu
Shayela DC odonsa kagesi + isinyathelo motors
Ububanzi bokulinganisa 10-800g
Ukulawula MCU, Isikrini sokuthinta
Ukunemba ± 0,1-1g
Kufakiwe power 1500W / 2000W
Ukunikezwa kwamandla kagesi 220V ± 10%
Isisindo 370 / 450kg
Izilimi ezisekelwayo IsiNgisi
Hoppers umthamo 1,6L (2,5L uyazikhethela)
Uhlobo lwesigaxa sokusabalalisa Ukudlidliza noma ukujikeleza
Langaphambilini GW10T16 Multihead Weigher
Olandelayo: I-GW14T25 Multihead Weigher
GW30T08 Multi-ikhanda Inhlanganisela Weigher
I-GW14T25 Multihead Weigher
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana namahora angama-24.uphenyo
IHefei 231139, i-Anhui, China